Ready Made ခေါက်ဆွဲထုပ်လေးကို ထူးဆန်းအောင် ဘယ်လိုပြုတ်စားမလဲ?
29 Aug 2017 . 2:57 PM
Instant Noodle တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကောင်းပြောကြတာ သိပ်မရှိပေမယ့် ကျန်းမာရေးနဲ့ မကိုက်ညီတာကိုတော့ လူအများထောက်ခံထားတယ်ဗျ။ ဒီတော့ တန်ဆေး လွန်ဘေး ချိန်ဆပြီး စားကြတာပေ့ါဗျာ။
မိုးရွာတဲ့ မိုးရာသီမှာ အိမ်ထဲခွေ ရုပ်ရှင်ကြည့်၊ စာဖတ်၊ ဟင်းချက်စားရတာ တော်တော် ပျော်စရာကောင်းတယ်။ အပြင်ထွက်လို့ စိုစိုစွတ်စွတ်ကို လူတိုင်းသိပ်သဘောမကျဘူး။ အလုပ်တွေ ရုံးတွေ တာဝန်တွေကတော့ မသွားမဖြစ်ပေ့ါဗျာ။
လူတိုင်းက ခေါက်ဆွဲပြုတ်တော့မယ်ဆို ပန်းကန်လုံးထဲ ခေါက်ဆွဲထည့်၊ ရေနွေးထည့် ပြုတ်က်ြတယ်ဗျ။ ဒါကလည်း အသင့်စားခေါက်ဆွဲရဲ့ တကယ့် ရည်ရွက်ချက်ပါ။ အများစုကတော့ ရေနွေးတည်ပြီး အိုးထဲ ထည့်ပြုတ်ကြတယ်ဗျ။ အထူးအဆန်းဘယ်လိုပြုတ်ကြမလဲ?
ခေါက်ဆွဲ ဆီချက်လုပ်တော့မယ်ဆို ခေါက်ဆွဲသွား ကျက်ပြီလို့ ယူဆချိန် ဇကာဖြင့် စစ်ပြီး ပန်းကန်လုံးထဲ ချက်ချင်းထည့် ဆီချက်ထည့် နယ်ကြတယ်။ နည်းနည်းကြာကြာလေး ပြုတ်လိုက်ပါ။ ဇကာဖြင့် သေချာစစ်ပြီး ရေအေး တစ်ထပ် အမြန်လောင်းလိုက်ပါ။ ခေါက်ဆွဲထဲက အချွဲဓါတ် ပျောက်သွားပါစေ။ ဒါက လူတိုင်း မလုပ်မိတဲ့ နည်းလေးနော်။
လက်လှမ်းမှီရာ အသီးအရွက် အကုန်ထည့်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ မာတဲ့ ကျက်တာ အချိန်ကြာမယ့်အရာတွကို ခေါက်ဆွဲနှင့် အရင် ထည့်ပြုတ်ပါ။
ကျွန်တော် အမြဲထည့်ဖြစ်တာလေးတွေ ပြောပြမယ်။
-ကြက်သွန်ဥ လေးစိတ်ခြမ်း (သူက ပြုတ်တဲ့ချိန် နူးရင် ချိုတယ်ဗျ)
-ပုဇွန်တို့ ကြက် ၀က်တို့ ရှိရင် ထည့်…( ၀က်ခေါက်ကြော်လည်း ကောင်းတယ်နော်)
ဒီတော့ဗျာ ခေါက်ဆွဲပြုတ်လေးကို အရောင်စုံ စိတ်ကူးပြီး ပြင်ဆင်ရတာပေါ့။
ဟင်းတစ်ပွဲ ပြင်ဆင်ရင် အရောင်စုံရမယ်ဗျ။ ခေါက်ဆွဲပြုတ်ဆို အ၀ါဖျော့ရောင်လေးရှိတယ်။
ဒီတော့ ငရုပ်သီး အနီလေးကို စိတ်ထည့်တော့ အနီရောင်လေးပါမယ်။
မုန့်ညှင်းလို အရွက်မျိုးထည့်တော့ အစိမ်းရောင်လေးပါမယ်။
ကြက်ဥလေးပါ ဖောက်ထည့်လိုက် အဖြူနဲ့ အ၀ါလေး ပါသွားမယ်။
ဒီတော့ ခေါက်ဆွဲ ပြုတ်တိုင်း ချက်ချင်းပြုတ်ပြီး မစားလိုက်နဲ့နော်။
စားမယ့်အစားအသောက်ကို အမြင်နဲ့ အရင် အရသာခံပြီးမှ အရသာအပြည့်စားနိုင်ကြပါစေ။ရကောက် – Akhayar
Instant Noodle တှနေဲ့ ပတျသကျပွီး အကောငျးပွောကွတာ သိပျမရှိပမေယျ့ ကနျြးမာရေးနဲ့ မကိုကျညီတာကိုတော့ လူအမြားထောကျခံထားတယျဗြ။ ဒီတော့ တနျဆေး လှနျဘေး ခြိနျဆပွီး စားကွတာပေ့ါဗြာ။
မိုးရှာတဲ့ မိုးရာသီမှာ အိမျထဲခှေ ရုပျရှငျကွညျ့၊ စာဖတျ၊ ဟငျးခကျြစားရတာ တျောတျော ပြျောစရာကောငျးတယျ။ အပွငျထှကျလို့ စိုစိုစှတျစှတျကို လူတိုငျးသိပျသဘောမကဘြူး။ အလုပျတှေ ရုံးတှေ တာဝနျတှကေတော့ မသှားမဖွဈပေ့ါဗြာ။
လူတိုငျးက ခေါကျဆှဲပွုတျတော့မယျဆို ပနျးကနျလုံးထဲ ခေါကျဆှဲထညျ့၊ ရနှေေးထညျ့ ပွုတျွကျတယျဗြ။ ဒါကလညျး အသငျ့စားခေါကျဆှဲရဲ့ တကယျ့ ရညျရှကျခကျြပါ။ အမြားစုကတော့ ရနှေေးတညျပွီး အိုးထဲ ထညျ့ပွုတျကွတယျဗြ။ အထူးအဆနျးဘယျလိုပွုတျကွမလဲ?
ခေါကျဆှဲ ဆီခကျြလုပျတော့မယျဆို ခေါကျဆှဲသှား ကကျြပွီလို့ ယူဆခြိနျ ဇကာဖွငျ့ စဈပွီး ပနျးကနျလုံးထဲ ခကျြခငျြးထညျ့ ဆီခကျြထညျ့ နယျကွတယျ။ နညျးနညျးကွာကွာလေး ပွုတျလိုကျပါ။ ဇကာဖွငျ့ သခြောစဈပွီး ရအေေး တဈထပျ အမွနျလောငျးလိုကျပါ။ ခေါကျဆှဲထဲက အခြှဲဓါတျ ပြောကျသှားပါစေ။ ဒါက လူတိုငျး မလုပျမိတဲ့ နညျးလေးနျော။
လကျလှမျးမှီရာ အသီးအရှကျ အကုနျထညျ့ဖို့ မမပေ့ါနဲ့။ မာတဲ့ ကကျြတာ အခြိနျကွာမယျ့အရာတှကို ခေါကျဆှဲနှငျ့ အရငျ ထညျ့ပွုတျပါ။
ကြှနျတျော အမွဲထညျ့ဖွဈတာလေးတှေ ပွောပွမယျ။
-ကွကျသှနျဥ လေးစိတျခွမျး (သူက ပွုတျတဲ့ခြိနျ နူးရငျ ခြိုတယျဗြ)
-ပုဇှနျတို့ ကွကျ ဝကျတို့ ရှိရငျ ထညျ့…( ဝကျခေါကျကွျောလညျး ကောငျးတယျနျော)
ဒီတော့ဗြာ ခေါကျဆှဲပွုတျလေးကို အရောငျစုံ စိတျကူးပွီး ပွငျဆငျရတာပေါ့။
ဟငျးတဈပှဲ ပွငျဆငျရငျ အရောငျစုံရမယျဗြ။ ခေါကျဆှဲပွုတျဆို အဝါဖြော့ရောငျလေးရှိတယျ။
ဒီတော့ ငရုပျသီး အနီလေးကို စိတျထညျ့တော့ အနီရောငျလေးပါမယျ။
မုနျ့ညှငျးလို အရှကျမြိုးထညျ့တော့ အစိမျးရောငျလေးပါမယျ။
ကွကျဥလေးပါ ဖောကျထညျ့လိုကျ အဖွူနဲ့ အဝါလေး ပါသှားမယျ။
ဒီတော့ ခေါကျဆှဲ ပွုတျတိုငျး ခကျြခငျြးပွုတျပွီး မစားလိုကျနဲ့နျော။
စားမယျ့အစားအသောကျကို အမွငျနဲ့ အရငျ အရသာခံပွီးမှ အရသာအပွညျ့စားနိုငျကွပါစေ။ရကောကျ – Akhayar